Håkan Larsson /”သတ္တုရိုင်း Properties ကို”: ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဘုတ်အဖွဲ့မှ false စာရွက်စာတမ်းများ, ပြီးအင်တင်းခဲ့သည်သည့် F-အခွန်နှင့်အသစ်ကုမ္ပဏီအမည်ကို | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 28 နိုဝင်ဘာလ, 2015 အားဖြင့် Holmbygden.se
ဒါဟာယခု Stendahls skandalhus ဒုက္ခသည်ခံယူဖို့ဘယ်အချိန်မဆိုရဖို့ feverishly ပြင်ဆင်နေသည်. ကြီးထွားလာအရှုပ်တော်ပုံနှင့်မူမမှန်သစ်ကိုပိုင်ရှင်ပေါ်ဆက်လက်ဦးမည်နေစဉ် Orebro ထံမှHåkan Larsson, ယခုအေးဂျင့်များနှင့်အတူပူးပေါင်း Stendahs. Johan Stendahl မှလင့်များ၏ထိုကဲ့သို့ဗီဇာငြင်းဆိုမှု၌ထင်ရှားပြီးနောက် ဆွီဒင်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းVästernorrland, ဒါကြောင့်ယခုအများအပြားအသစ်ကသံသယပေါ်ထွက်လာ:
ပြီးအင်တင်းခဲ့သည်သည့် F-အခွန်Håkan Larsson ကုမ္ပဏီများမှ.
ခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းအဘို့အခွင့်ပြုချက် / အဆောက်အဦမစ်စီစဉ်ခြင်းမရှိဘဲ.
Håkan Larsson နှင့် Johan Stendahl ဥပဒေရေးရာအကြံပေးရှေ့နေမိုက်ကယ် Sterner ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ဈရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဘုတ်အဖွဲ့မှ၎င်းတို့၏လေလံအတွက်Anundgårdဂုဏ်သတ္တိများ၏မှားယွင်းသောလေဝင်လေထွက်လက်မှတ်တင်သွင်း. အဆိုပါလေဝင်လေထွက်ထိန်းချုပ်မှုကုမ္ပဏီကနေလာကြပြီ F ကိုအခွန်မပါဘဲနှင့် စစ်ဆေးရေးများအတွက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲ. သက်ဆိုင်ရာနေရာထိုင်ခင်းဂုဏ်သတ္တိများလည်းစွပ်စွဲ protocols များကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်အရာပင်၎င်းတို့၏တိုက်ခန်းများခဲ့ဘယ်တော့မှမဆိုစစ်ဆေးရေးထေူနိုင်ပါတယ်.
မိုက်ကယ် Sterner လည်းအဖြစ် Stendahl ကဲ့သို့ဖြစ်၏ 2013 ပင်ထို့နောက်ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့မှအဆောက်အဦးများမီးကာကွယ်မှုများအတွက်မှားယွင်းသောစာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းသည့်အခါ. ထို့နောက်ကယ်ဆယ်ရေး Medelpad အဖြစ်ခဲ့သည် လိမ်ညာကြောင်းအတော်လေးသိသာ.
တနည်းကား, ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်အားပြောင်းလဲပစ် – မဟုတ် “သတ္တုရိုင်း Properties ကို”
ရုံခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်း၏ဝယ်ယူရေးအဘို့အချိန်အတွက် 2013 ပွောငျးလဲ “Stendahl skandalhus” စက္ကူပေါ်မှာသစ်တစ်ခု၏ပိုင်ရှင် “ငှားရန်” ကုမ္ပဏီများမှ – Johan Stendahl တစ်ဦးအသိအကျွမ်းကပိုင်ဆိုင်ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များ. လာသောအခါ Stendahl ၏အခြားအသိအကျွမ်းအလားတူပင်ကနောက်ဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခဲ့, Håkan Larsson ဂုဏ်သတ္တိများဝယ်. Håkan Larsson တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာအဖြစ် Johan Stendahls ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များစဉ်, သို့သော်, ယူ.
အခုတော့Håkan Larsson Bilkonsult AB သတ္တုရိုင်း Fastigheter AB ကနေ, သို့သော်, အမည်ပြောင်း. အကြောင်းပြချက်ကြောင့်နေလျှင် အဝတ်မခြုံဘဲ Stendahl မှHåkan Larssons ဆက်သွယ်မှု မရှင်းသော.
ပြီးအင်တင်းခဲ့သည် F ကိုအခွန်
အကြွေးသမိုင်း၏ပမာဏပြီးနောက်, liabilities နှင့်တာဝန်ခံမရှိခြင်းယခု Skatteverket က F-အခွန်Håkan Larsson ကုမ္ပဏီထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များယူဆောင်လာ. ဒီဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာထိုင်သော Johan Stendahls ရှေ့နေမိုက်ကယ် Sterner ဖြစ်သော်လည်း.
T ကရော့ခ် det, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့် Johan Stendahl မှဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုအငြင်း, အပြစ်ရှိဆွီဒင်ပြည်နယ်တစ်ဘီလီယံလေးပုံတစ်ပုံ, ဆှီဒငျရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပွင့်လင်းခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းအရှုပ်တော်ပုံအိမ်များနှင့်သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုလက်မှတ်ရေးထိုး Orebro ထံမှHåkan Larsson Bilkonsult ရ.
Håkan Larsson Holmes အတွက်၎င်း၏အမြစ်များကိုဖော်ပြရန်မယ်လို့သောအခါသူကဒေသဆိုင်ရာအားကစားကလပ်အသင်းနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်. ဤသည် Holmes Sportklubb အားဖြင့်ဆန့်ကျင်နေပါသည်, အဘယ်သူအားမျှမဆိုခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိတွေ့ဖူးသည့်အခါ. မဟုတ်သလိုဖွဲ့စည်းရွာသားများသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းဖို့ဆက်သွယ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ.
ခွင့်ပြုချက် / အဆောက်အဦမစ်စီစဉ်ခြင်းမရှိဘဲ
ဒါဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိအတွက်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်း၏စစ်ဆင်ရေးမအဆောက်အဦမစ်ရှိပါတယ်. အဆောက်အဦး၏အသုံးပြုမှုပြောင်းလဲမှုမှာပုံမှန်အားဖြင့်မလိုအပ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အဆောက်အဦးလျှောက်လွှာ, သငျသညျတယောက်ကိုတယောက်လှုပ်ရှားမှုကနေသွားရသည့်အခါဆိုလိုသတည်း.